प्रहरी चौकीबाटै आस्थाले भनिन् – सजाय भोग्न तयार छु ! थु नामा राख्न लगियो सिडियो कार्यालय (भिडियो सहित) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > प्रहरी चौकीबाटै आस्थाले भनिन् – सजाय भोग्न तयार छु ! थु नामा राख्न लगियो सिडियो कार्यालय (भिडियो सहित)
काठमाडौं । प्रहरी नियन्त्रणमा रहेकी गायिका आस्था राउतले कानूनभन्दा माथि कोही नभएको बताएकी छन् ।कानूनलाई ‘कोअ प रेट’ गर्न नै आफू प्रहरीमा उपस्थित भएको भन्दै उनले भनिन्, ‘कानूनभन्दा माथि कोही पनि छैन, म पनि छैन । कानूनका हिसाबले जे मलाई हुन्छ, त्यो सहर्ष स्वीकार गर्छु ।’ यस्तै कलाकार आस्था राउतमाथि त्रिभुवन विमानस्थलमा भएको प्रहरी चेकिङ र त्यहाँ भनिएको ‘दुर्व्यवहार’को भिडियो सार्वजनिक भएको छ ।
विमानस्थलमा एक महिला प्रहरीले ‘राष्ट्रिय कलाकार’माथि दु र्व्यव हा र गरेको र अ प श ब्द प्रयोग गरेको भन्दै गायिका राउतले केही दिनअघि प्रहरीलाई गा ली गर्दै फेसबुक लाइभ गरेकी थिइन् । उक्त लाइभमा गायिका राउतले प्रहरीलाई प्रहरी मेरो साथी भन्ने ‘स्लो ग न’ हटाउन भन्दै प्रहरीमाथि ख रो टिप्पणी गरेकी थिइन् । तर राउतको टिप्पणीमाथि नै धेरैले आ प त्ति जनाएपछि राउतले आवेशमा आएर अ प श ब्द बोलेको भन्दै मा फी मागेकी थिइन् ।
तर पनि उनले साना प्रहरीहरुलाई ‘म्यानर’ सिकाउन भन्दै ठूला प्रहरी अधिकारीलाई ‘सुझाव’ दिएकी थिइन् ।आखिर आस्था राउतमाथि त्रिभुवन विमानस्थलको सुरक्षा चेकिङमा भएको चाहिँ के थियो त रु रातोपाटीलाई विमानस्थल सुरक्षाको समयमा राउतमाथि भएको के थियो भन्ने भिडियो प्राप्त भएको छ ।१ मिनेट ४५ सेकेण्ड लामो भिडियोमा सुरुमा आस्था राउत र अर्का एक युवक सँगै आउँछन् । युवक पुरुषको लाइनमा चेकजाँचका लागि जान्छन् भने राउत महिला प्रहरी भएकोतिर आउँछिन् ।
राउत निस्कन लागेपछि महिला प्रहरीले कफी लैजान भन्छिन् । तर उनी कफी नलिई निस्कन खोज्छिन् । महिला प्रहरी आफैले कफी ल्याएर दिन्छिन् । तर पनि उनी अझै रिसाएर निस्कन खोज्छिन् । त्यसपछि महिला प्रहरीले राउतको ज्याकेट समातेर फेरि पनि कफी लैजान भन्छिन् ।तर, राउत कफी लैजान मान्दिनन् । त्यसपछि केही समय महिला प्रहरी र राउतबीच कफी टेबलमा सारासार हुन्छ ।
राउतले आफ्नो ज्याकेट लगाउँछिन् र ब्याग बोकेर कफी नलिई जान खोज्छिन् । त्यसै क्रममा राउतले महिला प्रहरीमाथि नै औँला ठड्याएर केही बोल्छिन् । राउतको हाउभाउ हेर्ने हो भने त्यो धम्कीजस्तो देखिन्छ । राउतले औँला ठ ड्या ए र ध म्की दिँदा पनि महिला प्रहरी चुपचाप आफ्नो काम गरिरहन्छिन् ।ज्याकेट लगाइसकेपछि राउत कफी नलिई त्यहाँबाट निस्किन्छिन् ।भिडियोकै बीचमा हेर्ने हो भने करिब ५ वर्षकी एक बच्चीले आफ्नो ज्याकेट खोलेर एक्सरे मेसिनमा राख्छिन् र शरीर चेकजाँच गराउँछिन् । अनि चेकजाँच सकिएपछि आफ्नो ज्याकेट लगाउँछिन् र बाहिर निस्किन्छिन् ।
विमानस्थलमा यस्तो चेकजाँच सामान्य प्रक्रिया हो । कुनै कलाकार वा ठूला व्यक्तित्व हुँदैमा श री र चेकजाँच नगर्ने भन्ने हुँदैन । महिला प्रहरीले आफ्नो नियमित काम गरेकी थिइन् ।प्रहरी स्रोतका अनुसार महिला प्रहरीले नभएर राउतलेचाहिँ महिला प्रहरीमाथि अ भ द्र व्य व हा र गरेकी थिइन् । ‘मलाई चिन्दैन, म को हुँ रु मेरो चे कि ङ्ग गर्नुपर्छ ररु’ भनेर राउतले उल्टै विवाद गरेको प्रहरीको दाबी छ ।